Emepụtara Lucid Puppy 5.1 | Site na Linux
A tọhapụrụ Lucid Puppy 5.1
Ọnwa ole na ole gara aga anyị gwara gị maka Puppy Linux 5.0 tọhapụ, na magburu onwe distro e ji ya obere size (ọ na-kwajuru na a mebere disk nke dị 64 MB) na-enweghị nke a na-detrimental ya functionalities na / ma ọ bụ visual mkpesa. Taa, ha kwupụtara ntọhapụ nke Lucid Puppy 5.1, distro sitere na Puppy 5.1 (Lupu). Ọ bụ ihe gbasara nwa nkita mana ya na Ubuntu dị ka ọdịdị.
Lucid Puppy 5.1 gụnyere ngwa ọhụrụ na nchekwa na nkwado maka eserese dị elu. Ekwadoro m ịgụ mara ọkwa na nzukọ ahụ site na playdayz.
Playdayz na-akọwa mwepụta nke ụdị ọhụụ a: Lucid Puppy 5.1 "bụ kọmpat ma zuru oke distro." Ọ bụ nkịta, n'ihi ya ọ bụ ngwa ngwa, enyi na enyi, na ihe ọchị na-atọ ụtọ nwere ike ịbụ sistemu desktọọpụ gị. Quickpet na Puppy Package Manager na-ekwe ka ntinye dị mfe nke ọtụtụ mmemme kacha mma maka Linux, nwalere ma hazie nke ọma ka ọ gbaa ọsọ n'okpuru Lucid Puppy. Ọ dịkwa oke mfe ịhọrọ ihe nchọgharị gị kachasị amasị ma ọ bụ asụsụ sistemụ. Lucid Puppy akpụkpọ ụkwụ ozugbo na akpaghị aka ahazi desktọọpụ gburugburu ebe obibi, na ngwaọrụ iji hazie desktọọpụ nke ọma na aka, na usoro ọbụna na-atụ aro onye ọrụ nke onye ọkwọ vidiyo na-eji maka arụmọrụ arụmọrụ ndị dị elu.
Maka nkọwa ndị ọzọ, echefula ileta hapụ ndetu.
Budata Lucid Puppy 5.1
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » A tọhapụrụ Lucid Puppy 5.1
Distro dị mma nke ukwuu. Ma gịnị kpatara na enweghị m ike iji ekwentị m dịka modem Internetntanetị?
Esi ewepu Windows oria nje ma ọ bụ malware site na iji Linux
Songbird maka Linux na-enweta mmelite